(कोभिड–१९) को खोप पत्ता नलागे पनि अमेरिका खुल्ने बताएका छन् । – Sandesh Munch
May 16, 2020 1711
खोप निर्माणको नेतृत्व ग्लोक्सोस्मिथक्लाइनकाको खोप विभागको नेतृत्व गरिसकेका मोनासेफ स्लाओइलाई दिइएको छ । ट्रम्पपछि बोल्दै स्लाओइले सन् २०२० को अन्तिमसम्म लाखौं डोजको कोरोना भाइरसको खोप निर्माण हुने दाबी गरेका छन् । उनले यसअघि यो समयसीमा निकै महत्त्वाकांक्षी भए पनि आफूले पूरा गर्न नसकिने प्रतिबद्धता नजनाउने बताएका थिए ।
Prevशरीरको कुन अंगमा भएको कोठीले कस्तो अर्थ राख्छ ! यो पढेर थाहपाउनुहोस्.
Nextनहुनु भइसक्यो, अब यसो गरौँ
लमजुङमा कोरोना संक्रमित ६२ पुगे, २२ जना निको भए